Idempiere, ny Open Source Erp miaraka amin'ny haitao OSGI | Avy amin'ny Linux
Luigys toro | | fampiharana, GNU / Linux, soso-kevitra
Ny lozisialy Loharano misokatra mitombo haingana, mamorona safidy maimaim-poana amin'ny rindrambaiko tompona izay tamin'ny fotoana taloha dia nibahan-toerana faritra ara-barotra sy manokana, iray amin'ireo faritra izay Open Source efa nahomby kokoa dia ao ny sehatry ny asa izay fampiharana maimaim-poana isan'andro dia manome vahaolana tsara kokoa. Idempiere dia iray amin'ireo rindranasa ireo, izay isaorana ny vondrom-piarahamonina tonga nanamafy ny faritra iray tena lehibe toy ny Fandaminana loharano, mamela ny fampidirana ireo fizotran'ny orinasa isan-karazany amin'ny fomba mahomby sy azo ovaina.
Idempiere tsy misy afa-tsy a Systems ny fitantanana harena ara-barotra (ny anglisy ERP Enterprise Resource Planning), izay manana ny fotony ihany koa a Mpitantana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (ny anglisy CRM Fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa), miaraka amin'ny a Manager Chain Supply (ny anglisy Fitantanana rojom-bolo SCM). Idempiere dia mifototra amin'ny Open Source ERP ihany koa Adempiere tsy mitovy amin'izany amin'ny fampidirana teknolojia OSGI izay mamela ny fandrafetana plug-ins ka mahatonga azy ho ERP tanteraka azo refesina, maodely ary mahaleo tena.
Ny tsenan'ny vahaolana momba ny drafi-pandraharahana orinasa dia tarihin'ny fampiasana rindrambaiko miaraka amina fahazoan-dàlana lafo vidy, ary vitsy ny safidy Open Source hanohanana azy ireo. Na izany aza, Idempiere dia maneho safidy mahaliana, miaraka amin'ny fotoana mety hanitarana satria izy io mifototra amin'ny fenitra ary novolavolaina tamin'ny sehatry ny programa Java Platform, Fanontana amin'ny orinasa (J2EE, nadika koa hoe Enterprise Java) ankoatry ny maha-izy azy imiankina amin'ny database ary mankafy ny fahaizana mifandray amin'ny tahiry maro. Toy izany koa, manolotra a fampandrosoana mitohy sy mavitrika izay namela azy ho matotra vokatry ny rindrambaiko.
Idempiere dia mamela antsika hanana:
Orinasa marobe (vondrona orinasa)
Fikambanana marobe (foibe, orinasa)
Drafitra fitantanana kaonty marobe
Ny mampiavaka an'i Idempiere dia ny azy hifanaraka amin'ny zava- amin'ny olona iray modely ara-barotra ary fenitra napetraka, mampitombo ny vokatra, mampihena ny lesoka amin'ny fidirana ary manafika ny filàna isan-karazany amin'ny orinasa amin'ny fitaovana tokana.
Idempiere dia manana andraikitra amin'ny fikajiana sy ny fanaingoana ankoatry ny andraikitra maro samihafa ho an'ny faritra miasa, ny fotony mizara ho vondrona lehibe roa ambin'ny folo izy io: Fitantanana ny rafitra, Rakibolana fampiharana, Fifandraisana amin'ireo antoko fahatelo, varotra, fividianana, fiverenana, mizana miavaka, fitantanana fitaovana, fitantanana tetikasa, famakafakana zava-bita, fananana, famokarana.
Idempiere teratany ara-drafitra dia misaintsaina ny onjam-piasa iray azo zaraina ho faritra enina: Fangatahana vola amin'ny faktiora, teny nalaina ho an'ny fanangonana, tahirimbolam-panjakana, fitehirizan-kevitra, talentan'ny olombelona, ​​izay misy fiantraikany mivantana amin'ny kaonty.
Toy izany koa Idempiere azo hitarina noho ny plugins izay mampiasa ny Teknolojia OSGI, misy amin'izao fotoana izao Plugins 52 ao amin'ny tahiry ofisialy izay manitatra ny fiasan'ny Idempiere, izay anisany:
Fampidirina amin'ireo sehatra hafa toa ny Asterisk, Google Map, JasperReport ankoatry ny hafa.
Fifanarahana amin'ny sehatra finday sy ny rindranasa vita amin'ny Native Android.
Toerana any amin'ny firenena maro samihafa (Mampifanaraka ny erp amin'ny lalàna mifehy ny firenena tsirairay avy izy ireo)
Mpanjifa POS ho an'ny faritra varotra.
Fampidirana amin'ny scanner, fitaovana, sensor.
Lohahevitra maro hanatsarana na hampifanarahana ilay interface.
Module vaovao ho an'ny karama, loharanom-pahalalana ho an'ny olona, ​​fananana ankoatry ny hafa.
Betsaka amin'ireo plugins ofisialy ihany koa avelao hanitatra ny fiasa fototra an'ny Idempiere, toy ny fitantanana trano fitobiana, fitantanana famokarana, fanafarana csv, fikojakojana ny fananana, fomba fandoavam-bola ankoatry ny hafa. Ho fanampin'izay, ny vondrom-piarahamonina dia manao plugins izay zaraina amin'ny fomba maro samihafa. Samy mizara ny lisitra GPLv2 na ny Erp na ny plugins, izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny fampiasa rehetra ao aminy.
Idempiere dia zaraina amin'ny mpanjifa roa:
Ny Desktop Version izay atao ambanin'ny Tranon-tsarimihetsika Swing Java, nilaza ny mpanjifa fa tsy dia ampiasaina ary ampiasaina amin'ireo orinasa izay tsy tadiavina fifehezana fidirana firy, matetika koa izy io no ampiasaina amin'ireo tranga ireo izay tsy zakan'ny mpizara tranonkala ny fifanarahan'ireo mpampiasa tadiavina, satria Ny mpanjifa amin'ny birao dia mandefa zavatra amin'ny haavon'ny pc / client. Ny kinova Swing dia be mpampiasa amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ary ny fanapariahana azy ao anatin'ny mpampiasa amin'ny tontolon'ny famokarana dia mitambatra.
Idempiere dia manana nitombo tamin'ny fomba haingana sy voalamina tsy isalasalana fa misaotra ny Teknolojia Osgi izay namela azy ho a ERP modular feno, izay ahafahana manolo modely ERP iray hafa nefa tsy misy fiatraikany amin'ny ambin'ireo modules. Izany dia nitondra tombony be dia be amin'ny toe-javatra asongadin'izy ireo:
Fanamorana ny fanovana
Famerenana haingana ny fampiasa.
Fanamorana ny fitsapana.
Fanamorana ny tetikasa misy mpamorona maro amin'ny ekipa samihafa.
Fitantanana ny fanaparitahana eo an-toerana sy any an-toerana.
Nahatonga azy io ho fitaovana mora azo haorina.
Podemos andramo Idempiere maimaim-poana ary ao anatin'ny minitra vitsy fidirana amin'ny demo ho an'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny https://test.idempiere.org/ miaraka amin'ireto angona fidirana manaraka ireto.
Mailaka: admin @ gardenworld.com(Ampidiro ireo toerana!) Password: GardenAdmin
Mailaka: superuser @ idempiere.comOR rafitra @ idempiere.com (Misy habaka) Password: System
Afaka mahazo ny loharano loharano avy amin'i Idempiere on SourceForge, misy boky torolàlana isan-karazany, fampianarana video, fitaovana ary tapa-kaody ho fampandrosoana ny fampianarana ao Idempiere, tahaka ny nanomezana ny vondrom-piarahamonina Idempiere andraikitra hamorona antontan-taratasy ofisialy ao amin'ny Wiki ofisialy Idempiere.
Ny hoavin'i Idempiere dia tena mamporisika, ny fitomboan'ny vondrom-piarahamonina dia somary lehibe tokoa, ny fampidirana fitaovana hafa dia namela vahaolana saika ny olana rehetra nipoitra, ny fampidirana an'i Osgi ao anatin'ny fotony dia nanokatra ny fahalianan'ny orinasa vaventy manohana tetikasa lehibe ary ambonin'izay fahombiazan'ny teo alohany hanatanteraka y Adempiere mamela anao hanana fahatokisana manana ny tontolon'ny famokarana ERP afaka manodina angona be dia be ary ambonin'izany rehetra fanafihana izay fizotran'ny fikambanana. Idempiere dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo lehibe fampanantenan'ny Rindrambaiko Maimaimpoana ary ny fampiasana azy amin'ny indostria kely, salantsalany ary lehibe dia manokatra varavarana ho amin'ny fahaizan'ny fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Idempiere, ny Open Source Erp miaraka amin'ny haitao OSGI
Ary tsy olana ve ny fampiasana java noho ny olana ateraky ny solosaina mpanjifa? Aleoko kokoa ny fampiasana fiteny amin'ny seriver-server izay mamela ny fampiasana tsotra fotsiny amin'ny browser rehetra raha tsy mila rindrambaiko fanampiny napetraka amin'ny solosaina, takelaka, finday, sns. an'ny mpampiasa farany.
Haider Lopez dia hoy izy:
Ny mpanaradia amin'ny lafiny mpanjifa dia tsy mila na inona na inona ianao, miaraka amin'ny mpitety tranonkala raha tsy manana plugin java ianao dia mety aminao. Ny mpizara irery no mampiasa java
Valiny tamin'i Haider López
Tazomy iDempiere! 😛
Tonga ho azy tao amin'ny bilaogy aho fa tiako ilay lohahevitra!
Jenkins CI, fitaovana iray ho an'ny automatique automatique